Dingana 8 hananganana pejy fitobiana mahomby | Martech Zone
The fiantsonana pejy dia iray amin'ireo fototra iorenany izay hanampy ny mpanjifanao hitety ny dian'ny mpividy azy. Fa inona marina izany? Ary ny tena zava-dehibe, ahoana no ahafahany mampivoatra manokana ny orinasanao?
Raha fintinina, an pejy fipetrahana mahomby dia natao mba handraisan'ny mpanjifa mety fepetra. Ity dia mety ho fisoratana anarana amin'ny lisitry ny mailaka, hisoratra anarana amin'ny hetsika ho avy, na hividy vokatra na serivisy. Na dia mety tsy mitovy aza ny tanjona voalohany, dia mitovy ny vokany. Ary izany dia ny fanovana ny mpanjifa ho mpanjifa mandoa vola.
Ankehitriny rehefa nofaritantsika ny atao hoe pejy fiantsonana, andao hiresaka momba ireo antony mahatonga azy io a vahaolana famolavolana tranonkala maharesy lahatra. Ireto misy dingana azonao arahana mba tsy ho tohaina ny pejinao fitobiana.
Dingana 1: farito ny mpihaino kendrenao
Alohan'ny hanombohanao manoratra dia tokony hanana hevitra mazava momba ny olona kendrenao ianao. Mamorona persona mpanjifa amin'ny fanomezana azy toetra sasany toy ny taona, miralenta, diplaoma amin'ny fanabeazana, asa, fidiram-bola isam-bolana, ary maro hafa.
Raha manao an'io ianao dia ho afaka hampifanaraka tsara ny hafatrao, hiresaka teboka fanaintainana manokana ary hanoritra ny soa azo avy amin'ny vokatrao. Rehefa avy mamaritra ny mpihaino anao ianao dia mirosoa amin'ny dingana manaraka.
Dingana 2: Ampiasao ny lalàn'ny famerenana
Ireo psikology ara-tsosialy dia manondro an'io trangan-javatra io ho faniriana lalina hamaly ny hatsaram-panahy rehefa misy olona manao zavatra tsara aminao. Ny santionany maimaimpoana, ny tatitra amin'ny antsipiriany, na ny lisitra fanoratana an-tsoratra tsotra aza dia ny sasany amin'ireo fanomezana ampiasain'ny orinasa hampiasa io fomba fiasa io amin'ny fomba mahomby.
Ka andao lazaina fa manandrana ianao mahazoa mailaky ny mpanjifa na asaivo misoratra anarana amin'ny lisitra mailaka izy ireo. Azonao atao ny mampanantena azy ireo tolo-kevitra manana lanja avo lenta hanentanana azy ireo handray andraikitra. Ary raha manome zavatra sarobidy ianao, dia hoheverin'izy ireo fa tsara kokoa aza ny zavatra atolotrao.
Dingana 3: manorata lohateny sy lohanteny maharesy lahatra
Lohateny iray no lozanao lehibe hanodinana ny mpanjifa; ny lohan'ny loha izay misarika ny sain'izy ireo. Mila mamaky mazava tsara ny hevitrao. Mandritra izany fotoana izany, ny zana-dohateny dia manome antsipiriany bebe kokoa momba ny vokatrao na serivisinao hahatonga ny mpanjifa hijanona sy hahalala bebe kokoa.
Rehefa manoratra roa dia ovay foana ny fampiasa anao ho tombony. Ohatra, raha mivarotra finday finday avo lenta ianao, aza miresaka momba ny mAh (milliampere-hour). Aleo kosa miteny hoe "Jereo ny Binge-mijery ny seho Netflix tianao indrindra." Amin'izany fomba izany no ilazanao ny fiantraikan'ny vokatra eo amin'ny fiainan'ny mpihaino anao sy ny famahana teboka fanaintainana iray amin'ny fiainany.
Dingana 4: Manomeza porofo ara-tsosialy
Ny porofo ara-tsosialy dia singa iray manandanja eo amin'ny pejin-tranonao satria mampiseho ny mety ho mpanjifanao fa efa mandray soa amin'ny fomban'ny vokatrao ny olona.
88% amin'ireo mpanjifa no matoky ny famerenan'ny mpampiasa ary torolàlana manokana.
Miezaha hahazo fijoroana vavolombelona avy amin'ny mpanjifa faly ary jereo ny fiakaran'ny tahan'ny fiovam-ponao. Rehefa dinihina tokoa, ny olona mirona hanaraka ny omby. Ary rehefa afa-po ny omby dia hanandrana handray andraikitra ny mpanjifa mety ho ampahany amin'ny traikefa.
Dingana 5: Adiresy ireo teboka fanaintainan'ny mpitsidika sy ny fomba fanafoanana azy ireo
Andao lazaina fa mivarotra programa fanazaran-tena any an-trano ho an'ny vao manomboka ianao. Ny iray amin'ireo teboka fanaintainanao eto dia ny fananan'ny mpanjifanao olana ara-pitokisana ateraky ny lanjany. Angamba manana olana amin'ny fampifanarahana ny akanjony izy ireo ary nisy fiantraikany tamin'ny fiainam-piarahamonin'izy ireo izany.
Ankehitriny, ny asanao dia ny mamorona pejy fitobiana izay manasongadina ity teboka fanaintainana ity dia esory amin'ny alàlan'ny serivisinao. Mety ho toy ny:
Makà olo-milomano amin'ny fampiononana ao an-tranonao. Or Ataovy vonona ho an'ny fahavaratra izany bod amoron-dranomasina izany.
Azonao atao ny manaraka an'ity amin'ny zana-dohateny mahasarika:
Ity programa fampihetseham-batana any an-trano ity dia natao hanamaivanana anao nefa tsy hiankina amin'ny fitaovana, fanafody, na fitaovana avo lenta. Ny hany ilainao dia ny fotoana, ny antony manosika ary ny fikolokoloana tsy tapaka.
Dingana 6: Mpitsidika mivantana amin'ny fiantsoana andraikitra
Aorian'ny fampidirana ireo singa voalaza etsy ambony, fotoana izao hamoronana ny Call to Action anao. Mila fohy, hita maso ary mampiasa fiteny mandresy lahatra. Andao hijanona miaraka amin'ny programa fampihetseham-batana any an-trano ohatra.
Raha tokony hipetraka ho an'ny jeneraly iray manaiky bokotra hahazoana ny mailak'izy ireo, azonao atao ny manamboatra azy amin'ny fitenenana Midira amin'ny ekipa or Manomboha mandoro an'io matavy io anio. Tokony hampiasa sary manaitaitra ihany koa ianao hitarika ny mpanjifa mivantana mankany amin'ny call-to-action (CTA). Inona koa, ampiasao loko mifanohitra hanampiana ataovy miavaka ny bokotra.
Dingana 7: Fitsapana, fitsapana, fanandramana… Ny zava-drehetra
Mazava ho azy, mbola mila manao fitiliana A / B ianao mba hampitomboana ny tahan'ny fiovam-ponao. Andramo ny zava-drehetra… manomboka amin'ny lafiny famolavolana, sary, endritsoratra, lohateny, lohateny ambany, sary, bokotra, antso-to-hetsika… rehetra. Ny fametrahana paikadin'ny pejy fitobiana dia tsy feno mihitsy raha tsy misy paikady fitiliana.
Paikady lehibe ihany koa ny fitsapana pejy maro amin'ireo olona sy fividianana samihafa. Raha paikady B2B, ohatra, dia azonao atao ny manana pejy fitobiana izay natokana ho an'ny indostria tompoinao. Na raha pejy fitobiana mifantoka amin'ny mpanjifa izany dia azonao atao ny manamboatra manokana ny atiny sy ny sary arakaraka ny taonany, ny lahy sy ny vavy, ny toerana misy azy.
Dingana 8: Mampiasà sehatra sehatra fitobiana
Ny famolavolana pejin-tsambo mahomby dia tsy mitaky ezaka na fotoana iray tonta rehefa manana ny vahaolana momba ny pejy fitodiana mety ianao. Ny vahaolana amin'ny fipetrahana dia ahafahanao manangana pejy fipetrahana tsara tarehy miaraka amin'ny fahafaha-manao kopia, mizaha toetra, mampiditra ary manitsy tsy misy fiezahana
Zahao hoe Instapage, vahaolana amin'ny pejy fampandehanana mora ampiasaina izy io izay hanome hery anao hampihatra ireo torohevitra amin'ity lahatsoratra ity!
Atombohy ny fitsapana na mahazo Demo amin'ny Instapage
Manomboka amin'ny mpanjifa mety ho mpankafy mpihaza
Ny pejy fitobiana maharesy lahatra dia afaka mampiakatra ny taham-panovana anao ary manampy amin'ny fampiroboroboana haingana ny orinasanao. Amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza etsy ambony, dia hampitombo ny fahombiazan'ny pejin-tranonao manomboka amin'ny fialantsasatra ianao ary hampihena ny fotoana fanarahana azy. Aza adino fotsiny ny mametraka soatoavina ambonin'izay zavatra hafa rehetra ary hanova ny mpanjifa mety ho mpankafy ianao amin'ny fotoana fohy.
Disclosure: Martech Zone dia mpiara-miasa amin'i Instapage!
Tags: pejy fipetrahana mahombyInstapagefiantsonana pejyfandaharana pejy fitateranalohatenin-pejydingana fitobianatoro-hevitra momba ny pejyzana-dohatenyfijoroana vavolombelona